होस गर्नुस् , यसकारण तपाईंलाई पनि पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ ! « NagarikTimes
होस गर्नुस् , यसकारण तपाईंलाई पनि पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ !
२९ भाद्र २०७५, शुक्रबार १३:४१
काठमाडौँ : के तपाईँलाई शरीर चिलाउँछ, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ । यदि छ भने तपाईंलाई पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएमा हेलचक्ताइँ नगरी चिकित्सक कहाँ उपचारका लागि जानु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार १३:४१
थापाईराख्नुस् : यौनसम्पर्कमार्फत् सर्ने यी ४ नयाँ खतरनाक रोग, जस्ले स्वास्थ्यमा पुर्याउछ ठूलो क्षती
बीबीसी यौन संक्रमणबाट पैदा हुने रोग (एसटीआई) कुनै अपवाद होइन । हामी यस्तै चार ब्याक्टेरियाबारे जानकारी
सफलताको असली राज : दैनिक सेक्स गरौं, छिट्टै हुनेछ प्रमोशन पनि
आउनुहोस आज हामी सेक्ससँग जोडिएका केही राजका बारेमा जानकारी दिन्छौं । जब तपाई सेक्स गर्नुहुन्छ
कण्डम दिवस सन्दर्भ : थाह पाइराख्नुस् यस्का फाइदा र प्रयोग गर्ने तरिका
काठमाडौँ : सुरक्षित यौन सम्पर्क र त्यसमा कण्डमको भूमिकाबारे सचेतना फैलाउने उद्देश्यसहित बुधबार नेपालसहित विश्वभर
थाह पाइराख्नुस् : कुन उमेरका महिला-पुरुसबीचको सम्बन्धले पाइन्छ बढी यौन सन्तुष्टी ?
प्राय कुन उमेरको यौन सम्बन्ध बढी रोमान्चक र आनन्ददायक भन्ने बिषयमा धेरै बहसहरु हुने गर्दन्
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए अनौंठो तथ्य : पहिलो यौनसम्पर्क कहिले र कत्तिसम्म गर्ने ?
मानव जीवनका लागि यौनसम्पर्क अत्ति आवश्यक भएको छ । नेपाली समाजमा आज पनि यौनका बारेमा
कलिलै उमेरमा यौन सम्पर्क गर्नु धेरै पछुतोको विषय : ‘भर्जिटिनी लुज’ गर्ने सही समय कुन र ?
कलिलै उमेरमा यौन सम्पर्क गर्नु धेरै युवाका लागि पछुतोको विषय बन्ने गरेको एक अध्ययनको क्रममा